AbaPeyinti bokuMakisha endlela | China Umatshini wokuPhawula kweNdlela kwiFektri kunye nabaXhasi
—— Ipeyinti yokumakisha ezindleleni ——
Micro Glass Ubuhlalu
Singumvelisi omkhulu we China kunye nomzi mveliso weentsimbi zeglasi ezincinci. Iibhola zeglasi ziindawo ezincinci zeglasi ezisetyenziselwa ukumakisha kwendlela kunye nokumakishwa kwendlela okuzinzileyo ukubonisa ukukhanya kumqhubi kumnyama okanye iimeko zemozulu ezimbi - ukuphucula ukhuseleko nokubonakala. Ubuhlalu beglasi budlala indima ebaluleke kakhulu kukhuseleko ezindleleni.
Ipeyinti yokuHanjiswa kweNdlela eqhelekileyo
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wepeyinti lobushushu eliqhelekileyo lokumakisha. Ipeyinti yokumakishwa kweCold Solvent Road iyimveliso enobume bendalo, iqulathe i-resin yeAcrylic eguqulweyo, imibala edibeneyo, izinto zokugcwalisa njl njl zilungele ukusetyenziswa kwiindlela zebituminous kunye nekhonkrithi. Ingasetyenziswa ngempumelelo kwizixhobo zokutshiza ezingenamoya okanye zomoya.
Thermoplastic Road Ukwenza Ipeyinti
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wendlela yokwenza iteyinti ye-thermoplastic. Inkangeleko: Akukho mibimbi, ibala, iblister, crack, off, Amatayara ancanyathiselwe, umbala wokugcwalisa kufuneka uvalwe ngokomgangatho; ukumelana namanzi: Akukho ziganeko zingaqhelekanga kwiiyure ezingama-24 emva kokuntywiliselwa emanzini.
Ipeyinti yokuPhawula yomGangatho weThermoplastic
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wepeyinti yokumakisha ye-thermoplastic. Iipeyinti zendlela yokuphawula yokumisa i-thermoplastic iqulathe i-resin ye-thermoplastic resin, irabha eguqulweyo, iigcwalisi, kunye nezinto ezizodwa kunye nezinye izinto. Iphuhliswa ngokwesiseko sokulandela ukubonakala okuphezulu kunye nokushukuma. Isetyenziswa ngokubanzi kwimigca yeendlela (imigca egqithileyo engavumelekanga), imigca yendlela, ukuwela imigca yokuhla, njalo njalo.